အကောင်းဆုံး Semi-high Arc-shaped Multi-layer Display Open Chiller ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ | Runte
Semi-high Arc-shaped Multi-layer Display Chiller ကိုဖွင့်ပါ။
◾ အပူချိန်2~ 8 ℃ ◾ အရှည်၏ အဆုံးမဲ့ အပိုင်းများ
◾ လက်ရာမြောက်သော တစ်ဝက်တစ်ပျက်စွန်း ◾ EBM အမှတ်တံဆိပ်ပရိသတ်များ EBM
◾ ညကုလားကာ ◾ LED မီး
နည်း ၂ မျိုးဖြင့် ထားနိုင်သည်။
1. နံရံနှင့် နောက်ကျောဘက်သို့ ဘေးဘောင်များဖြင့် တစ်ယောက်တည်း ရပ်ပါ။
2. အဆုံးတစ်ခုစီတွင် အဖုံးတစ်ခုစီထည့်ပါ၊ semi-high open chiller အစုတစ်ခုဖွဲ့ပါ။
ရိုက်ပါ။ မော်ဒယ် ပြင်ပအတိုင်းအတာ (mm) အပူချိန်အကွာအဝေး (℃) ထိရောက်မှု အတွဲ(L) ပြသဧရိယာ(㎡)
GLKJ အအေးခန်းဖွင့်ပါ။ GLKJ-1309FH 1250*905*1500 ၂~၈ 440 ၁.၄၈
GLKJ-1909FH 1875*905*1500 ၂~၈ 660 ၂.၂၁
GLKJ-2509FH 2500*905*1500 ၂~၈ 880 ၂.၉၅
GLKJ-3809FH ၃၇၅၀*၉၀၅*၁၅၀၀ ၂~၈ 1320 ၄.၄၂
ခေါင်းစွပ် 975*1960*1500 ၂~၈ 330 1
ပြသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် အမြင်အာရုံခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြင့်ရန် အဆင့်မြင့်စတိုးဆိုင်များအလယ်တွင် ထားရှိသည့် High-end arc open chiller
သင့်ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များ၏ တိကျသောအကြောင်းအရာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်ကိုနေ့စဥ်လုပ်ဆောင်ရန်မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို စာရင်းပြုစုထားသော လက်စွဲစာအုပ်များရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည် ထုတ်ကုန်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်နိုင်ပြီး လက်စွဲများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို လည်ပတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် အဓိကအားဖြင့်- ရေခဲသေတ္တာယူနစ်၏ဆီပြောင်းခြင်း၊ ကွန်ဒင်ဆာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် သင့်ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ဆောင်ရွက်သနည်း။ နိုင်ငံခြားမှာ ရုံးခန်း ဒါမှမဟုတ် ဂိုဒေါင်ရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား တစ်သက်တာဝန်ဆောင်မှုပေးကာ အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်မှု၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြေများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားတွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူနှင့် အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီများရှိပြီး လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ အမြန်ဆုံးပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
သင့်ကုမ္ပဏီတွင် မည်သည့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ ရှိပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အီးမေးလ်၊ WeChat၊ Whatsapp၊ Facebook၊ LinkedIn နှင့် အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်တိုင်ကြားချက် ဟော့လိုင်းများနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများသည် အဘယ်နည်း။
သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက လုပ်ငန်းမန်နေဂျာထံ ဦးစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မကျေနပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ၏ စာတိုက်ပုံးသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။admin@runterefrigeration.comနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျေနပ်လောက်သော အဖြေနှင့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးပါမည်။
3 Layers စင်များ
ကြေးနီပြွန်နှင့် တံတောင်ဆစ်များ ထူလာသည်။
မျက်နှာပြင် ရေခဲသေတ္တာ၏ ကြေးမုံဘေးဘောင်
အဖွင့်အအေးပေးစက်အတွက် display angel ကိရိယာများ
ယခင်- Low Temperature Condensing Unit အတွက် စက်ရုံစျေးနှုန်း - Bitzer Semi-closed Piston Condensing Unit - Runte
နောက်တစ်ခု: အေးခဲထားသောအစားအစာများအတွက် Doule Side Air Outlet Island ရေခဲသေတ္တာ
open chiller အမျိုးအစားကို ပလပ်ထိုးပါ။
ဖြောင့်မှန်တံခါးပြသမှု Chiller ရေခဲသေတ္တာ
Standard Double Temperature Chiller နှင့် ရေခဲသေတ္တာ...
Semi-high ပေါင်းစပ်ထားသော Vertical Open Display Chiller
ရေခဲသေတ္တာအတွက် Counter မှ Glass Door Service...
Doule Side Air Outlet Island အအေးခန်း ရေခဲသေတ္တာ...